News - Nkowa na analysis Of Crankshaft n'ichepụta Technology
Industlọ ọrụ Ngwa
Nkọwa Na Nnyocha Of Crankshaft Manufacturing Technology
Crankshafts na ọtụtụ-eji na injin. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị eji arụ ọrụ maka igwe ụgbọ ala bụkarị igwe na igwe. N'ihi na ezi ọnwụ arụmọrụ nke ductile ígwè, dị iche iche okpomọkụ agwọ ọrịa na n'elu ike ọgwụgwọ na-rụrụ iji melite ike ọgwụgwụ ike, ekweghị ekwe na-eyi ndị na-eguzogide nke crankshaft. Ductile ígwè crankshafts nwere ala na-eri, otú ductile ígwè crankshafts e ọtụtụ-eji n'ụlọ na mba ọzọ. N'okpuru ebe anyị ga-ewebata teknụzụ nrụpụta crankshaft.
Crankshaft n'ichepụta teknụzụ:
1. Nkedo technology nke ductile ígwè crankshaft
Inweta oke okpomọkụ, sọlfọ na-adịghị ọcha, igwe a gbazere agbaze bụ isi ihe na-emepụta ígwè ductile dị elu. Ngwongwo mmepụta ụlọ na-adaberekarị na cupola, ọ bụghị tupu a gbazee ígwè a wụrụ awụ; nke abụọ bụ akwa ọcha na ezi coke. Ka ọ dị ugbu a, a nabatala ụzọ mgbaze pre-desulfurization nke ụzọ abụọ, nke na-eji cupola agbaze agbaze agbaze, kpochapụ ya n'èzí ọkụ, wee kpoo ahụ ma dozie ihe mejupụtara n'ime ọkụ ọkụ. Ka ọ dị ugbu a, nchọpụta ihe igwe na-agbaze agbaze agbaala gburugburu site na iji igwe na-agụ ihe na-agụ agụụ.
Usoro mmetụ ikuku na-emetụta ikuku dị elu karịa usoro ụdị ụrọ ụrọ, yana enwere ike nweta nkenke nkenke crankshaft dị elu. Moldjá ájá na-emepụta site na usoro ahụ nwere àgwà nke enweghị nrụrụ ọ bụla, nke dị mkpa karịsịa maka ọtụtụ ntụgharị crankshaft. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ndị na-emepụta crankshaft na China webatara usoro ịkpụzi ikuku nke ikuku site na Germany, Italy, Spain na mba ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị ndị nrụpụta ole na ole webatara usoro mmepụta niile.
2. Ibe ya bụrụ teknụzụ nke igwe crankshaft
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e webatala ọtụtụ ngwa eji arụ ọrụ na China, mana n'ihi ọnụọgụ pere mpe, yana teknụzụ na -emepụta ebu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ụfọdụ akụrụngwa anaghị arụ ọrụ ya. Ke ofụri ofụri, e nwere ọtụtụ ochie ibe ya bụrụ ngwá na mkpa ka a gbanwee na-emelite. N'otu oge ahụ, teknụzụ na akụrụngwa azụ na-aga n'ihu ka nọ n'ọkwá dị elu, a na-etinyekwa teknụzụ dị elu mana ọ gbasaghị.
3. Teknụzụ nhazi teknụzụ
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ usoro mmepụta crankshaft na-arụ ọrụ na igwe nkịtị na ngwa ọrụ pụrụ iche, yana nrụpụta ọrụ na akpaaka dị ala. Ngwaọrụ na-eme ihe ike na-ejikarị ngwa ngwa eji eme ihe iji gbanwee akwụkwọ akụkọ crankshaft na olu, na nkwụsi ike nke usoro ahụ adịghị mma, ọ dịkwa mfe iwepụta nnukwu nrụgide dị n'ime, ọ na-esikwa ike inweta ezi uche igwe nkwere. General gụchara eji crankshaft egweri igwe dị ka MQ8260 maka ike ike-egweri - ọkara gwụ - mma-egweri - polishing, na-emekarị site ntuziaka ọrụ, na nhazi àgwà bụ ejighị n'aka.
4. Okpomọkụ ọgwụgwọ na n'elu ike ọgwụgwọ technology
Isi teknụzụ maka ọgwụgwọ okpomọkụ nke crankshaft bụ ọgwụgwọ na-ewusi elu. Ductile ígwè crankshafts na-adịkarị nkịtị na-akwadebe maka elu nkwadebe. Ọgwụgwọ na-eme ka ihu ala na-ejikarị mgbatị ma ọ bụ nitriding eme ihe. Ejirila crankshafts gbagọrọ agbagọ ma na-agba ya gburugburu. Ngwa ndị e webatara gụnyere igwe na-ekpuchi ikuku AEG na igwe eji EMA.
Wuxi edu nkenke Machinery Co., Ltd. awade ahịa niile nha zuru ezu Omenala fabricgha ọrụ metalgha na usoro pụrụ iche.
adreesị No.7 Yuansheng Rd, Yangjian Industrial Park, Wuxi, China
igbe akwụkwọ ozi info@leadmachinery.net